Xasan Sheekh oo Madaxtooyada kula kulmay wafdigii ugu horeeyay ee heer Caalami - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xasan Sheekh oo Madaxtooyada kula kulmay wafdigii ugu horeeyay ee heer Caalami - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxtooyadakulan kula yeeshay wafdigii ugu horeyeay ee heer caalami ah oo ay hoggaamineysay ergeyga Gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Geeska Afrika Annette Weber.
Kulanka ayaa looga wadahadlay dib u soo celinta taageerada Midowga Yurub ee Soomaaliya, waxayna ergeyga Midwoga Yurub soo bandhigtay sida ay uga go’an tahay Midowga Yurub garab istaagga siyaasadda iyo qorsheyaasha horumarineed ee Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya.
Danjire Annette Weber ayaa ah mas’uulkii ugu sarreeyey ee ka socda Midowga Yurub ee soo gaara dalkeenna muddooyinkan, waxaana wehlisay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Marwo Tiina Intelmann.
Previous articleMaxaa ka jira in Xildhibaan Mahad Salaad loo magacaabayo Agaasimaha Hay’adda NISA..?
Next articleMuuse Biixi oo ku socda xeeladihii Muddo kororsiga ee Maxamed Farmaajo (Akhriso)